Boqoroow, Dameerku Maskax Ma Lahayn (Akhri “Sheekadan waxyar oo waxa aad ka fahantay hoos ku soo qor | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
Boqoroow, Dameerku Maskax Ma Lahayn (Akhri “Sheekadan waxyar oo waxa aad ka fahantay hoos ku soo qor”)
Beri hore waxaa saaxiib ahaa libaax iyo dawaco. Waxay ku noolaayeen kayn aad iyo aad u qurux badan. Maalin walba wey wada socon jireen oo wey wada u gaarsan jireen. Waxaa isna ayda ku noolaa dameer shilis.
Maalin maalmaha ka mid ah buu libaaxi dawacadii ku yiri “Dayooy, waxaad u tagtaa dameerka ayda inagula nool oo waxaad ku tiraahdaa, ‘Libaax baa ku martiqaaday'”. Dayo oo faraxsan baa iyada oo baqdin iyo xishood muujinaysa tiri “Boqoroow, amarkaaga degdeg baan u fulinayaa!”.
Markiiba intay orod isa sidaysay bey aydii ka raadisay dameerkii. Waxay dondoontaba waxay heshey isaga oo intuu carmo ka dhergay biqlaynaya. Iyada oo qoslaysa bey dameerkii ku tiri. “Saaxiboow waa ku salaamay. Waxaan kuu wadaa war xiiso leh. Boqorkii aydu wuu ku martiqaaday ee inakeen!”.
Dameerkii oo aad u faraxsan baa yiri, “Dayooy, war farxad leh baad ii keentay! Haddii boqorkii aydu i martiqaaday qadarini igama maqna ee ina wadi aan boqorka la kulmee!”.
Muddo yar kadib waxa ay u yimaadeen libaaxii oo geed hadhweyn jiifa. Marku maqlay sanqadhii dayo iyo dameerkii buu soo booday. Intu cirka isku shareeray buu dameerkii dusha kaga yimi oo luqunta kala jebiyey. Markuu diley buu dayo ku yiri, “Caawa baan ku cashaynaynaa ee waa yara seexanayaaye ilaali hilibka oo ha taban haddii aanad doonayn adigana in lagu…….”
Dayo oo arkaysay waxa dameerka ku dhacay oo baqdin la gariiraysay baa ku celcelisay, “Waayahay boqoroow!, Waayahay boqoroow!, Soo naso cidina amarkaaga ma jabinaysee!”
Dawacadii waxa ay agfadhiisatay dameerkii. Waxaa haysay gaajo aad u xun, libaaxiina waa soo noqon waayey. Waxay ku tashatay inay hilibka meel aan libaaxu arkayn waxooga ka cunto. Ugu danbayntii waxay sanka ka nuugtay maskaxdii dameerka oo liday.
Libaaxii marku soo noqday wuxuu fiirfiiriyey dameerkii. Shaki baa galay markaas buu dayo ku jeestay oo yiri, ” Dameerka hilibkiisii ma qaarbaa maqan?”
Adiga aan su’aal ku weydiiyo akhrinaya qoraalkan, Maxaad is leedahay bay dayo ku jawaabaysaa oo maskaxdaada ku soo dhacay ?.
Dayo oo naxsan baa ku jawaabtay, “Boqoroow uurkujirtii wey dhan tahay!”
intuu indhow kulul ku eegey buu ku yiri “Maskaxdiina?”
Dayo ayaa la soo booday, “Boqoroow, dameerku maskax ma lahayn! Haddu maskax leeyahay miyuu kuu imanlahaa?”
Jawaabta libaaxa iyo sheekadan waxa kaaga baxay akhristaha ayaan uga tagay.
@ Joornalka Gurmad ee ka soo baxa Laascaanood – Prof Xayd.
#LIKE_SHARE_COMMENTS Ha ilaawin si aan sheekooyin kale kuula